Nanokatra ny sisintaniny ho an'ny mpizahatany iraisam-pirenena ny Repoblika Dominikanina
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any amin'ny Repoblika Dominikanina » Nanokatra ny sisintaniny ho an'ny mpizahatany iraisam-pirenena ny Repoblika Dominikanina
The Ministeran'ny fizahan-tany amin'ny Repoblika Dominikanina (MITUR) dia nanokatra ny sisintaniny ho an'ireo mpizahatany iraisam-pirenena tamin'ny 1 Jolay 2020 tamin'ny fanombohan'ny dingana 4 amin'ny fizotran'ireo fepetra nambaran'ny Komisiona avo lenta momba ny fisorohana sy ny fifehezana ny Coronavirus.
"Misokatra izao ny indostrian'ny fizahan-tany Dominikana ary mandray mpitsidika amin'ny fomba tompon'andraikitra ary manaraka ny tolo-kevitr'ireo fikambanana nasionaly sy iraisam-pirenena momba ny fahadiovana, ny famonoana mikraoba ary ny fanalavirana ny fiaraha-monina", hoy ny minisitry ny fizahantany, Francisco Javier García.
"Hatramin'ny fotoana ahatongavan'ny mpitsidika eto amin'ny firenentsika dia ho hitany fa ny fepetra napetraka dia miantoka fiainana azo antoka sy mahafinaritra mba hahafahan'izy ireo mankafy ireo toerana manintona nahatonga anay ho mpizahatany lehibe any Karaiba," hoy ihany izy.
Mba hanampiana ny mpanjifa sy ny varotra izay mitady hanararaotra an'ity fanokafana ity ary hamolavola drafitra ho an'ny Ivotoerana vaovao momba ny fizahan-tany an'ny Dominikana. Ny loharanom-pahalalana dia hetsi-panoherana natao hanomezana fampahalalana marina sy vaovao amin'ireo mpitsidika amin'ny ho avy ary hamaly ireo fanontaniana momba ny dia matetika. Ity sehatra ity dia ahafahan'ny mpitsidika mihaino ny fanavaozana ny indostrian'ny COVID-19 avy amin'ny loharanom-baovao marim-pototra ary manome fanampiana mivantana amin'ny chat ho an'ny fanontaniana mety ananany.
Ao anatin'ny ezaka hiantohana ny fandehanana an-habakabaka azo antoka sy mahomby mankany amin'ny firenena, dia misy fampiharana fanampiny ampiharina amin'ny seranam-piaramanidina. Manomboka amin'ny fahatongavany izany, ny mpandeha rehetra dia hanamarina ny maripana rehefa mivoaka ny fiaramanidina. Raha misoratra mari-pana mihoatra ny 100.6 F degre ny mpandeha na manolotra soritr'aretina hafa, ny manampahefana eo amin'ny seranam-piaramanidina dia hanao fitsapana COVID-19 haingana ary hanomboka ireo kavina fitokana-monina sy fitsaboana ny raharaha. Ankoatr'izay, nametraka torolàlana mitaky ny fanalavirana ara-tsosialy ary koa ny fampiasana tsy maintsy atao ny saron-tava ho an'ny mpiasa sy ny mpandeha. Ao anatin'ny endrika fifindra-monina sy fomba amam-panao nomen'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka na avy amin'ny manampahefana Dominikanina, ny mpandeha dia takiana mba hameno sy handefa Affidavit momba ny fahasalaman'ny mpitsangatsangana. Amin'ny alàlan'ity taratasy ity, manambara ireo mpandeha fa tsy nahatsapa na dia iray aza izy ireo Covid-19 soritr'aretina mifandraika ao anatin'ny 72 ora farany ary manome antsipirian'ny fifandraisana mandritra ny 30 andro manaraka.
Ny fepetra sy fitsipika dia misy, fa tsy ferana amin'ny:
Fandraisana an-tanana ny mari-pana isaky ny mpitsidika rehefa manao sonia fanambarana izy ireo momba ny fahasalamana • Manome saron-tava sy gel famono otrikaretina ho an'ny vahiny • Fanaparitahana ny toerana fandraisam-bahiny mba hitazomana ny halaviran'ny faritra rehetra iraisana (fandraisana, trano fisakafoanana, dobo lomano sns) Famonoana otrikaretina • fanesorana ireo sakafo sy zava-pisotro ho an'ny tena, ka ny mpiasa ihany no mitantana azy io • Fandaharana manokana ho an'ny fikarakarana sy ny fitokanan'ireo vahiny manana soritr'aretina.
Manadio sy mamono otrikaina ny latabatra rehetra eo anelanelan'ny mpanjifa iray sy ny iray hafa • Fitsapana COVID-19 isaky ny herinandro ho an'ny mpiasa miasa • Voafetra hatramin'ny 35% ny fahaiza-manao mba hiantohana ny elanelana misy eo amin'ny mpanjifa. nipetraka teo ambony latabatr'izy ireo izy io taloha • hapetraka ao anaty bara rehetra ny dispenseran'ny bakteria bakteria, amin'ny toerana mora alain'ny mpanjifa.
Ny halaviran'ny roa metatra farafahakeliny eo anelanelan'ny latabatra sy ny fetran'ny fisakafoanana folo isaky ny latabatra • Fampiharana menus dizitaly, menus vita pirinty azo alefa na safidy hafa izay mampihena ny fifandraisana ara-batana • Fampiasana disinfectants ny sakafo ho an'ny vokatra nohanina • Famonoana olona matetika ny toerana rehetra ampiasain'ny mpiasa na mikitika matetika ny mpanjifa.
TRANSPORT TRANSPORT MARITIME SY FIASA
Maka ny maripanan'ny mpandeha tsirairay alohan'ny hidirany amin'ny fitaterana fitsangantsanganana • Fanadiovana tsara ny fitaovana rehetra ampiasain'ny mpanjifa (tanky, saron-tava, alika sns.) Alohan'ny sy aorian'ny fampiasana • Hodiovina avokoa ny sambo alohan'ny sy aorian'ny fampiasana azy • Mihazona ny halaviran-toerana azo antoka mandritra ny hetsika.
ASA FIVORIANA SY FITSIDIHANA hafa
Ireo torolàlana ireo dia mihatra amin'ny mitaingin-tsoavaly, fitsangatsanganana, tsipika zip, zaridaina misy lohahevitra ary fanaovana loko.
Fampihenana ny fivezivezin'ny fiara hatramin'ny 50% hiantohana ny elanelana azo antoka misy eo amin'ny mpanjifa • Fampiasana sarontava ao anaty fiara rehetra • Fanomanana zotra tokana hialana amin'ny fiampitana lalana amin'ireo vondrona hafa • Fanadiovana ny faritra sy ny fitaovana rehetra nifandraisan'ny mpanjifa (reins, fehiloha, fiarovan-doha, akanjo, sns.)
Ny antokon'andraikitra miandraikitra ny fanaraha-maso ny fanarahan-dalàna momba izany dia ny minisiteran'ny fizahantany sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ho fanampin'izay, raha ny momba ny hotely, napetraka ny programa fanamarinana amin'ny alàlan'ny fananganana ny Council Quality izay notarihin'ny National Association of Hotels and fizahan-tany (ASONAHORES) izay hiantoka ny fanarahan'ny orinasa ny lalàna mifehy, izay hanomezana ny mpitsidika fahatsapana filaminana sy fahatokisana.